Author Topic: မော်ဒယ်၊ရုပ်ရှင်မင်းသမီး၊အဆိုတော် ကလိတိတိ (Read 67145 times)
« on: February 24, 2011, 09:17:24 PM »
မြန်မာမော်ဒယ်၊ရုပ်ရှင်မင်းသမီး၊အဆိုတော်မလေးတို့အကြောင်းလေးတွေကို ကလိတိတိ သရော်ကြရင်ကောင်းမလား .. ဘူ့အကြောင်းကို သရော်ကြရင် ကောင်းမလဲ...
ဘယ်သူမှစထားတာ မတွေ့လို့ ၀င်ပီးတော့ အစထောင်လိုက်ပီ နောက်ကနေသာ ညှော်ကြပေတော့ဂျာ... ဖတ်ချင်လှပီ...
« Last Edit: September 02, 2011, 11:00:13 PM by deedthar »
လှုပ်ရှားလို့ မုန့်စားရတာကို မနာလိုမဖြစ်ကြပါနဲ့...
« Reply #1 on: February 26, 2011, 08:53:07 AM »
ကဲ ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာဘဲ ရေးလိုက်တယ်ဗျာ။
နံမည်ကြီး အဆိုတော်နှင့် သရုပ်ဆောင်တို့၏ အင်တာဗျူး
ကျနော် များ NAKED NEWS သတင်းဌာနမှ CEO ဖြစ်သူ ကိုကြီးပြုံး ရဲ့ လမ်းညွှန် စေခိုင်းချက်အရ
ဒီညမှာတော့ လွန်စွာ ခမ်းနာပြီး ကြီးကျယ်လှသော Rock Concert ပွဲသို့ သတင်းယူရန် ရောက်ရှိလို့
နေပါတယ်။သတင်းထောက် သတင်းကြေငြာသူ အဖြစ် ကျနော် Seeker / ကင်မရာ မန်း အဖြစ် ကိုအိုင်မေး / ဘေးနားမှ ဟကောင် ဟိုကောင် နဲ့ စုံနေအောင်ပြောပြီး စီစဉ်ညွှန်ကြားနေသော ဘကြီးတုတ်
အသံဖမ်း နဲ့ ရုပ်သံ ထုတ်လွှတ်ရေး အင်ဂျင်နီယာ အဖြစ် မာယာ ရိုက်ကူးရေးယာဉ်မောင်း နဲ့ စက်အင်ဂျင်နီယာ အဖြစ် ကိုလစ်ကာ တို့နဲ့အတူ ရောက်ရှိလို့လာပါတယ်။
ဒီည မှာ ကျနော်တို့အချိန်မရှိတဲ့အတွက် တွေ့တဲ့ အဆိုတော် တွေနဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေကိုဘဲ အင်တာဗျူးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဟောပြောရင်း ဆိုရင်း နဲ့ တွေ့လိုက်တာကတော့ ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ ခပ်သွက်သွက်လျှောက်လာတဲ့ အဆိုတော် ဖြူဖြူကျာ်ပိန်း ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Seeker: အမ ဖြူဖြူကျော်ပိန်းရေ ကျနော်တို့က NAKED NEWS သတင်းဌာနက ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီညမှာ အမနဲ့ ကြုံလို့ အင်တာဗျူးလေး နဲနဲ ဗျူးချင်ပါတယ်။ အချိန်ရမလား ?
ဖြူဖြူကျော်ပိန်း: အော် ၀ုတ်ကဲ့ရပါတယ်။(အသံသြ ကြီးဖြင့်ပြန်ဖြေသည်)။ naked news ကဆိုတော့ဖြူဖြူလဲ ကြည့်ရပါတယ်။
ဖြူအရမ်းကြိုက်တာဘဲ ခစ်ခစ် ။ဒါဆိုဖြူ အ၀တ်အစားတွေအကုန် ချွတ်ထားလိုက်မယ်လေ။ ပိုပီး ပီပြင်သွားအောင်။
Seeker : ရပါတယ်။ဒီလောက်နဲ့ လုံလောက်ပါတယ်။ ကျနော်တို့သတင်းဌာနက ကျယ်တဲ့လူတွေကို မပြပါဘူးခင်ဗျာ။
Seeker sorry ဒီလိုပါ။ ကျနော် ဆိုလိုတာက အသံကျယ်ပီး အောင်တဲ့သူတွေကို မပြတာကိုဆိုလိုတာပါ။ မဖြူဖြူ ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လို အဆိုတော်ဖြစ်လာတယ်
နောက်အနာဂတ်အတွက် ဘယ်လောက်ထိရည်မှန်းထားတယ်။ နံမည်လဲ ဘာလို့ ဖြူဖြူကျော်ပိန်းပေးထားတယ် ဆိုတာလေးကိုအရင်ဆုံးပြောပြလား ခင်ဗျ။
ဖြူဖြူကျော်ပိန်း အော် ၀ုတ်ကဲ့ ဖြူက ငယ်ငယ်တုန်းက အရမ်းအော်ပီးငိုတာလေ။ ဖြဲကားပီး တော့ကိုငိုတာ။ အိမ်ကလူတွေ မခံနိုင်ဘူး။ အဲဒီတော့အိမ်က ဖြူဖြူကို ဖြဲဖြဲ ဆိုပြီး နံမည်ပြောင်ပေးတယ်။
ဖြဲဖြဲဘ၀ကနေ နောက် အပျိုဘော်ဝင်ကာစမှာ ဖြဲဖြဲ ဆိုတဲ့ နံမည်ကို မလိုချင်တော့ဘူး။ ထပ်ပီးပြောင်းချင်လာတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဖြူက အပျိုပေါက်စသာပြောတာပါ။
Seeker ဘာပြဲတာလဲ ခင်ဗျ
ဖြူဖြူကျော်ပိန်း (မျက်စောင်းထိုးလျှက်) အသံပြောတာ အသံ အသံ တကယ်ထဲ မပြောချင်ဘူး ထစ်ကနဲ ဆိုဒါဘဲတွေးလား မသိပါဘူး ယောက်ျားတွေများ
Seeker ဟုတ်ကဲ့ ဆက်ပြောပါ မဖြူ
ဖြူဖြူကျော်ပိန်း အဲဒီအချိန်မှာ ပေါ့နော် အပျိုပေါက်စမှာ အသံတော်တေ်ာ ပြဲနေတော့ကိုယ့်နံမည်ကို ပြဲပြဲ ဆိုပီး ကိုယ့်ဟာကို ထပ်ပေးလိုက်တယ်။ နောက်တော့ ရည်စားလဲရလာတယ်
ရည်းစားက ဖြူ့ကို အသားမဲလို့ဆိုပြီး ရမယ်ရှာပီး ထားသွားတယ်။ အမှန်တော့ စားပီး နားမလည်လုပ်တာ။ ဖြူက ဒီလောက်လဲ မဲတာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီမှာ သူ့ကိုစိတ်နာပီး အဖြူ ဖြစ်သွားအောင်ဆိုပီး ဖြူဖြူကျော်ပိန်း ဆိုပီး ပေးခဲ့တာပါ။
Seeker အော် ဟုတ်ကဲ့ မဖြူရဲ့ နံမည် history လေးကိုသိရတော့ တကယ့် classic story ပါဘဲဗျာ. သီချင်းဆိုဖြစ်ပုံလေး ပြောပြပါဦး။
ဖြူဖြူကျော်ပိန်း ဖြူက ဆေးကျောင်းသူလေ။ သိတယ်မလား ဆေးကျောင်းသူဆိုတော့ ရေချိုးရင်လဲ ကြာတယ်။ ဆေးနေရတာကိုး။ အဲဒီတော့ ဆေးရင်းနဲ့ သိချင်းကို
အားမနာပ အသံပြဲ ကြီး လျှောက်အော်ဆိုမိတယ်။ တခါတုန်းကဆို ဖြူ ရေချိုးခန်းထဲကနေ သီချင်းအော်ဆိုတာ။ ဟိုဘက်အိမ်က ဖြူ့ကို ကျေးဇူးတောင် တင်သေးတယ်။
အဖြစ်က ဒီလို။ ဟိုဘက်က ကပ်ရက် အိမ်မှာ အလည်လာလာနေတယ် ကိုဒီဗယ် ဆိုတဲ့ လူရှိသတဲ့။အဲဒီလူက အရက် အရမ်းသောက်ဆိုဘဲ။
တခါတုန်းက သူအရက်သောက်လို့ကောင်းတုန်း မူးနေတဲ့အချိန် ဖြူကလဲ ရေချိုးခန်းထဲမှာ ဆေးရင်းနဲ့ အသံပြဲနဲ့ထုံးစံအတိုင်း သီချင်းအော်ဆိုတာပေါ့။
ဘာဖြစ်တယ်မသိပါဘူး။ ဖြူ့အသံကိုလဲကြားရော အဲဒီ ကိုဒီဗယ်ဆိုတာ နောက် မလာတော့ဘူးတဲ့။ အရက်ကိုတောင် စိတ်နာသွားတယ်လို့ကြားတယ်။
အရက်သောက်တိုင်း ဖြူ့အသံကို နားထဲမှာ ကြားယောင်နေလို့ အရက်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုလား ဘာလား မသိပါဘူး။ အဲဒီလိုတခါ ကြုံဘူးပါတယ်။
Seeker အော် တကယ် မှတ်သား စရာပါဘဲနော်။ မဖြူက တကယ်ကိုအဆိုမှာ genius လို့ပြောလိုရတယ်ပေါ့နော်။
ဖြူဖြူကျော်ပိန်း ခစ်ခစ် ဒါက အသေးအဖွဲဘဲ ရှိသေးတယ်။ ဖြူ့အသံကို ကြားလို့ ဖြူနဲ့ဝေးတဲ့ နေရာမှာ ရောက်နေတဲ့တနှစ်ထဲ တက်ခဲ့တဲ့ ဆေးကျောင်းသားတွေ တပုံကြီး
တချို့ ဥရောပတွေမှာ တချို့ အမေရိက တွေဘက်ထိတောင် ထွက်ပြေးကြရရှာတယ်။ ဖြူ့အသံနဲ့ ဝေးရမှာ နေမှ ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ ဆေးကျောင်းသားတွေလေ။
အခုလောက်ဆိုရင် ဒေါက်တာတွေ ဘာတွေ ဖြစ်နေလောက်ရောပေါ့။
ဥပမာ ပြောရရင် ရှင်တို့ သိနေတဲ့ နံမည်ကြီး ဒေါက်တာလမ်းမတော်သား ဆိုတာ ကိုကြည့်လေ။ သူဆိုဖြူ့အသံကို အရမ်းကြောက်လွန်း လို့
မြန်မာပြည်မှာတောင် မနေရှာဘူး။ တခါတလေ သတိရပါတယ် ကျောင်းတက်ခဲ့ရတဲ့ နေ့ရက်တွေကို....................
Seeker ဟုတ်ကဲ့ စကားစဖြတ်တယ်လိုတော့ မထင်ပါနဲ့။ သီချင်းဆိုတော့ ဘယ်လို mood နဲ့ဆိုတယ် ဘယ်လို ပညာ နဲ့ဆိုတယ် ဆိုတာပါ ပြောပြပါလား ခင်ဗျ။
ဖြူဖြူကျော်ပိန်း အော် ၀ုတ် ဒီလိုလေ ဖြူ့အသံက ..........................
(ဆက်ပါဦးမည်။ အဆင်ပြေမည့် နေရာမှာ ထားပေးဘို့ moderator အား ဒီနေရာကနေပီး တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား။)
« Last Edit: February 26, 2011, 08:30:07 PM by imail »
« Reply #2 on: February 26, 2011, 05:44:44 PM »
အခုလို Naked News ရဲ့တင်ဆက်မှုကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နာတစ်ခုတော့ မရှင်းတာရှိတယ် seeker ရာ.. Naked News ကနေအင်တာဗျူးတာ ဆိုတော့ ဖြူဖြူကျော်ပိန်းကို အင်တာဗျူးတာ နင်ဖင်ပြောင်ကြီးနဲ့ ဗျူးတာလား။ ဖင်မြင်ရင် နာမနေနိုင်တာ နင်လည်းအသိ။ နင်ဒီဖက်လာပြီး နာ့လာဆွနေပြီ
« Reply #3 on: February 26, 2011, 08:41:19 PM »
Quote from: imail on February 26, 2011, 05:44:44 PM
ခွင်္ီး ပြောင်မလား ကိုမေ်းလ်ရဲ့ အဲဒါကြောင့်ပြောတာ ကိုမေးလ် ရုံးကို ပုံမှန်မတက်ဘူး အပြင်မှာ ဗျူးရင် မချွတ်ဘူးလေ ခွီး
ဖြူဖြူကျော်ပိန်းတောင် ချွတ်မယ် တကဲကဲလုပ်နေလို့ မနဲ တားထားရတယ်။
« Reply #4 on: February 26, 2011, 09:52:28 PM »
Quote from: Seeker on February 26, 2011, 08:41:19 PM
(ကိုဒီဘီပျောက်နေရွေ့ ကိုအစိကားကို ရန်စပါသည်)
« Last Edit: September 02, 2011, 11:02:43 PM by tatkyatgyi »
« Reply #5 on: February 26, 2011, 10:47:36 PM »
Quote from: maryar on February 26, 2011, 09:52:28 PM
ခွီးတာနဲ့ ၀ဲ နဲဘာဆိုင်ပါလိမ့်??
« Reply #6 on: February 27, 2011, 12:32:20 AM »
ကိုမေး အတွက် အကိတ်လေးတွေ့ပြီပေါ့
« Reply #7 on: February 27, 2011, 07:40:59 AM »
ဖြူဖြူကျော်ပိန်း အော် ၀ုတ် ဒီလိုလေ ဖြူ့အသံက နဂိုက ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ ညှောင်နာနာ အသံလေး။ အဲဒါကို ကိုယ် ငယ်ငယ်ထဲက ပြဲအောင် အော်ခဲ့တာတွေ ဘာတွေ လုပ်ခဲ့တော့
လည်ချောင်းအိုးထဲမှာ ရှိတဲ့ အသံအိုးက ဖြူ့ကို စိတ်ကုန်သွားတယ် ထင်ပါတယ်။ အဲဒီကနေစပီး အသံကပြောင်းလာတာ။ကိုယ်ကလဲ နဲနဲတော့ လုပ်ယူရတာပေါ့လေ။
ပြီးတော့ သီချင်းဆိုရင် တကယ်ရင်ထဲက ၀မ်းခေါင်းထဲက လာတဲ့အသံက မှတကယ်ကို ကောင်းတာလေ။ အဲဒီတော့ ဖြူက ၀မ်းခေါင်းထဲက အသံကို ညှစ်ထုတ်ပီးဆိုတော့
သီချင်းဆိုရတဲ့အသံကပိုကောင်းတဲ့သဘောဖြစ်သွားတာပေါ့။အဲုဒါကြောင့် ဖြူ့ဖြူ့အသံကို ငှက်ဆိုးထိုးတဲ့အသံထက် ပိုဆိုးတယ်လို့ပြောကြတာပေါ့နော် ပိတ်သတ်ကြီးက
Seeker အော် တကယ်ကို မှတ်သားစရာဘဲပေါ့ မဖြူ။ တချို့က ထင်နေကြတာက မဖြူအသံက အာလုပ်သံကြီးလို့ ထင်နေကြတယ်။ အဲဒါလေးကိုလဲ တဆိတ်လောက် ရှင်းပြပါလား ခင်ဗျ
ဖြူဖြူကျော်ပိန်း အဲဒလို လူတွေကထင်ကြတယ်လား ခစ်ခစ် ရီရတယ်။ ဗြဲ........။ အဲဒါ အာလုပ်သံမဟုတ်ပါဘူး။ ဖြူရဲ့အာလုပ်သံက သီချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာ မထွက်ပါဘူး။
ကိုကိုနဲ့ အတူတူအိပ်တဲ့အခါဆိုရင်တော့ အာလုပ်သံက ထွက်ဖြစ်တယ်။ 69 အချိန်ဆိုရင် အာလုပ်သံက ပိုပီး ပီပြင်တယ် သိလား
အခုလက်ရှိတွဲနေတာက ကိုကိုကြပ်နဲ့တွဲနေတာ။ သူ့နဲ့ 69 အချိန်ဆို အာလုပ်သံနဲ့ ပိုအော်ဖြစ်တယ်။ ကြုံ့တဲ့အခါ နားထောင်ကြည့်လေ။
အွန်လိုင်းမှာ ဖြူကိုယ်တိုင် ဖြန့်လိုက်မယ်။ အခုခေတ်က ဘာမဆို အွန်လိုင်းမှာ ရောက်တာမြန်တော့ ဖြူလဲ စဉ်းစားနေတာ.။ဒီထက် နံမည်ကြီးအောင်
အွန်လိုင်းမှာ တခုခု တင်ရင်ကောင်းမလား ပေါ့ နော်။
Seeker ကောင်းတာပေါ့ မဖြူရယ် ဒါမှ လူတွေက မဖြူဆိုပီး စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ကြည့်ကြမယ်။ ပြီးတော့ ဒီထက်လဲ ပိုပီး နံမည်ကြီးလာမယ်လေ။ မဖြူ သီချင်းဆိုတော့ စတိတ်ပေါ်မှာ
အငြိမ်မနေဲဘဲ ဟိဘက်ပြေးလိုက် ဒီဘက်ပြေးလိုက်နဲ့ အဲဒါ ဘယ်လို performance လဲခင်ဗျ။
ဖြူဖြူကျော်ပိန်း အော် အဲဒါလား အဲဒါက ဒီလိုပါ ဖြူဖြူ ကို ဆရာတွေက သင်ပေးတယ်လေ သီချင်းတွေ ဆိုတဲ့အခါမှာ မောအောင်လုပ်ပေးရတယ်တဲ့ အဲဒီလိုမောလာတဲ့အခါ ထွက်လာတဲ့
vocal ရဲ့ force ကို ညှစ်ပီးထွက်လာတဲ့ vocal power က ပိုပီး ထိရောက်အောင် အသုံးချရသတဲ့ အဲဒါကြောင့် အငြိမ်မနေဘဲ ဟိုဘက်ပြေး ဒီဘက်ပြေးနဲ့ ဆိုတာလေ
ဟိုးအရင် နှစ်တွေက မိုးစက်လေး ဆိုတဲ့ ကောင်လေးနဲ့ တွဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီ မိုးစက်လေးနဲ့ တွဲတော့ ထုံးစံအတိုင်း အတူတူ နေတာပေါ့နော်။
အဲဒီအချိန်မှာ ဖြူက မောတဲ့အခါ နဲ့ ကြုံရင် vocal power ကို ၀မ်းဗိုက်ကနေ ညှစ်ညှစ် ထုတ်ပီး အသံကို mood ထည့်ပီး အော်တာလေ။ အဲဒီအချိန်မှာ
ညှစ်ထုတ်တော့ အခန့်မသင့်ရင် လေလည်မိတာပေါ့နော်။ ခစ်....အဲဒီ မိုးစက်လေး ဆို ဖြူ အရူးထထပီး အော်တာနဲ့ လေလည်တာနဲ့ဘဲ
နောက်ဆုံးသည်းမခံနိင်ဘဲ ပြေးတော့တာဘဲ။ ခစ်ခစ် ဒါလဲ သူ့အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ခမျာလဲ တော်တော် ခံစားလို့ကောင်းတဲအချိန်မှာ အဲဒလိုကြီး ကြုံတယ်ဆိုတော့လေ
ဖြူနားလည်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဖြူက ဂီတကို အဲလောက်ထိရူးသွပ်တာ ခစ်....။ အဲဒလိုမျိုးလဲ ကြုံရင် ကြုံသလို ကျင့်
တယ်။ အဲဒီကနေမှ နောက်တော့ ရှိုးပွဲတွေဘာတွေ ဆိုတော့ လူက အငြိမ်မနေနိုင်ဘဲ ဟိုဘက်ပြေး ဒီဘက်ပြေးနဲ့ဆိုမိတာပေါ့နော်။
အဲဒလိုလျှောက်ပြေးတော့ လူတွေများ ပိုပီး စိတ်ဝင်စားပီး လူကြိုက်များမလို့လေ။ လူတွေကလဲ အားပေးပါတယ်။ တော်တော် ရူးတဲ့ အရူးမတဲ့။
တော်ရုံအရူးထတာမဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပီး ပိတ်သတ် ကြီးဆီက တုန့်ပြန်မှုတွေ ကြားရလို့ အရမ်းကို ၀မ်းသာမိတာပေါ့ရှင်။
Seeker ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ မဖြူ ဆိုတဲ့ သ်ီချင်းတွေက စီလင်းဒီယွန် (celine dion) ရဲ့ သီချင်းတွေ များသလိုဘဲနော်။ တခါတလေ သူရဲံ အရိပ်ငွေ့တွေပါနေသလိုဘဲ။
ဖြူဖြူကျော်ပိန်း ရှင်က အဲဒလိုထင်တယ်လား။အမှန်တော့ ဖြူက စီလင်း ထက်ပိုပီး ဆိုနိုင်တာပေါ့။ စီလင်း ဆိုတာကို တခါတလေ အားမရဘူး။ အဲဒီတော့ သူ့သီချင်းတွေကို ပြန်ပီး ကော်ပီ
ဆိုတာပေါ့နော်။ နင့်လောက်တော့ ငါက သနားတယ်ပေါ့နော်။ငါလဲ ဆိုနိုင်တယ် ဆိုပီးတော့ ဆိုပြတဲ့သဘောပါ။ ရှင်သိလား ကျမက သူ့သီချင်းတင်မကဘူး။
အဗလယ် လဗျင်း ...................
Seeker Avril Lavigne ပါ မဖြူ
ဖြူဖြူကျော်ပိန်း သိပါတယ်။ ဆရာလာမလုပ်ပါနဲ့။အဆင်ပြေသလိုပြောတာ။ သူ့ကိုလဲ ဖြူက အားမရဘူး။ စောစောကစကားကိုပြန်ဆက်မယ်ဆိုရင် power of love တို့ my heart will go on တို့ကို
ဖြူ ဆိုထားတာ ကြည့်ပါလား။ ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ။
Seeker ဟုတ်ပါတယ် တော်တော်ကောင်းပါတယ် နားရင်းထတီးချင်လောက်အောင်ကို ကောင်းပါတယ်
ဖြူဖြူကျော်ပိန်း ဒါပေါ့ အဲဒါ ဘုရားပေးတဲ့ အသံလေ။ ပီးတော့ ရှင်သိလား ဖြူက ဖြူတို့ church က လူငယ်အဖွဲ့မှာ ဖြူ မရှိလို့မဖြစ်ဘူးလေ။ အဲဒီတော့ လူငယ်အဖွဲ့ဝင်တွေက ဖြူ့ကို ကြည့်လို့
မရတော့ဘူး။ ဘယ်ကြည့်လို့ရမလဲ ဓမ္မတေး တွေ ဆိုတဲ့အခါဆို ဖြူ့ရဲ့အသံက အားလုံးထက် ပိုပီး ထူးပီး ကြောင်ပီးထွက်တာလေ။ အဲဒီတော့ သူတို့ဆိုလို့ ဘယ်ရတော့မလဲ။
ပီးတော့ ဖြူ က အရင်တုန်းက IC နဲ့ဆိုတာလေ။ သူတို့အဖွဲ့ကလဲ ဖြူ့ကို အားကိုးလာကြတယ်။ ဖြူတဲ့ နင် ငါတို့ဝိုင်းမှာဆက်ဆိုနေရင်တဲ့ နင် နံမည် ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့
အဲဒလိုတောင်းဆိုလာတော့ ဖြူလဲ IC အဖွဲ့ကို တော်တော် သနားသွားတယ်။ အဲဒါနဲ့ သူတို့နဲ့လက်တွဲဖြုတ်ပီး တခြား band တွေ မှာဘဲ ကပ်ပီး ဆိုရတော့တာပေါ့နော်။
အဲဒလိုတွေပြောလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂုဏ်ဖေါ်သလိုဖြစ်မှာလဲ စိုးရိမ်မိပါတယ်။ အဲဒလိုမဟုတ်ပါဘူး နော်။
Seeker မဖြူရဲ့ ရှိုးပွဲတွေ MTV တွေမှာ ဂါဝန်ဖါးဖါးကြီးတွေ ၀တ်ထားတာ တွေ့ရတယ်နော် အထူးသဖြင့် ဂါဝန်ဖြူတွေ ပေါ့။ဘာလို့ပါလဲ ပီးတော့ သီချင်းဆိုတော့ မျက်နှာ ရှံရှုံသွားတယ်
ဘာလို့ပါလဲ။mood ၀င်သွားတဲ့သဘောလား မဖြူ
ဖြူဖြူကျော်ပိန်း ဟုတ်ပါတယ်။ ဖြူရဲ့ခြေထောက် ခြေသလုံး မှာ ငယ်ငယ်က ပေါက်တဲ့ ယာဖုလေးတွေ ရှိတယ်လေ။ အဲဒါကိုလူတွေမြင်မှာကြောက်တော့ ၀တ်တာပေါ့နော်။
နောက်တစ်ခုက ဖြူက အ၇မ်း ယောက်ျား ယူချင်တာ.။ မင်္ဂလာဆောင်ချင်တာလဲ တပိုင်းကိုသေနေတာ။ စိတ်ကူးထဲမှာ ကိုကိုကြပ်နဲ့တွဲပီး မင်္ဂလာဆောင်တယ်ဆိုပီး
စိတ်ကူးယဉ်ရတာအမော အဲဒီတော့ အခုထဲက ကြိုပီး ရင်ခုန်တဲ့အနေနဲ့ wedding ဂါဝန် မဟုတ်ဘဲ ဂါဝန်ပွ ကြီးတွေ ၀တ်တာပေါ့နော်။
ပီးတော့ ဖြူက အသားမဲတော့ အသားအရမ်းဖြူချင်တာ အဲဒါကြောင့် နံမည်က ဖြူဖြူ ၀တ်တဲ့ဂါဝန်က အဖြူရောင်လေ။
သီချင်းဆိုတဲ့အခါ မျက်နှာရုံရတာက ဟိ ဘယ်သူမှမပြောနဲ့နော် ဖြူက တောထူတယ်သိလား ပီးတော့ ဂါဝန်ပွကြီးတွေ ၀တ်ထားတော့ အောက်ကလဲ ချွေးပြန်တာပေါ့နော်။
ပီးတော့ ၀တ်ထားတဲ့ ပင်တီကလဲ ကိုလစ်ကာ ရဲ့အပေါင်ဆိုင် မလျှော်ရသေးတဲံ ပင်တီကို ခဏငှားပီး ၀တ်ထားတာလေ။
အဲဒီတော့ ချွှေးပြန်တာနဲ့ တောထူလို့ မွေှးညှပ်တာနဲ ပင်တီ ဟောင်းနဲ့ ဆိုတော့ ယားတာပေါ့နော်။ ယားတော့ အောက်ကလူတွေကလဲ ကြည့်နေတာလေ။ အဲဒီတော့ သူတို့ရှေ့မှာ
ကုတ်လို့ ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲ။ အဲဒလို ခံစားရတဲံ့ဝေဒနာ စဉ်းစားသာကြည့်တော့။ အဲဒါကြောင့် မျက်နှာက ရှုံရှုံသွားတာပါ ခိ လူတွေက ဖြူ mood ၀င်တယ်လို့ထင်ကြတာပေါ့နော်
အမှန်တော့ အဲဒါပါရှင်ရယ် ဘယ်သူမှ မပြောနဲ့နော်။ ကြုံလို့ ရှင့်ကို ရှင်းပြတာ။
Seeker ဟုတ်ကဲ့ မဖြူရေ အားလုံးလဲ ပြည့်စုံပါပီး ကျေးဇူးလဲအများကြီးတင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ မဖြူ ပိတ်သတ် ကြီးကို ဘာများပြောချင်ပါသလဲ
ဖြူဖြူကျော်ပိန်း ၀ုတ်ကဲ့ ရှင့် နောက်ဆုံးအနေနေဲ့ဖြူဖြူ ပြောချင်တာကတော့ ပိတ်သတ်ကြီးတင်မကဘူး ကမ္ဘာမှာ ရှိတဲ့ လူတွေကို ဖြူ့အနေနဲ့ သီချင်းတွေ ဆိုပီး ကမ္ဘာကြီးကို ထပ်နှိ်ပ်စက်သွားဦးမှာပါလို့
(ကဲ ဒီညမှာ အဆိုတော်ဖြူဖြူကျော်ပိန်း နဲ့အင်တာဗျူးပီးတော့ နောက်ထပ် ဗျူးရမဲ့လူကို လိုက်ရှာလို့နေပါတယ်။)
« Last Edit: February 27, 2011, 10:27:39 AM by Seeker »
« Reply #8 on: March 17, 2011, 09:35:10 AM »
အထက်က ကို Seeker ရဲ့လမ်းညွန်ချက်အရကိုယ်Seeker အနာမယ်ကြီးအဆိုတော်နောက်တစ်ယောက်ကိုအင်းတာဗူး ဖို့အတွက် သွားနေသောကြောင့် ကျန်တော်zawye တစ်ယောက်လည်းလွယ်အိတ်အစုတ်လေးတစ်လုံးကိုလွယ်ကာအသံဖမ်းစက်အစုတ်လေးနှင့် ယခု အိန်တာနက် ပေါတွင်အလွန်တရာမှ ခောတ်စားနောသော အဆိုတော်ဗုတ်ပြဲကြီး ပီပါဟိန်းအားအင်တာဗျူးရန်အတွက် ပီပါဟိန်းနေထိုင်ရာ ဒလ မြို့ပြင်ဇရပ် သုသန်ဘေးတွင်အဖီချနေသော သူမ၏ နေအိမ်သို့သွားရောက်ကာသတင်းယူလိုက်ပါသည် ......
zaw: ပထဦးဆုံးမေးခွန်းအနေနဲ့ ပီပါဟိန်း ဆိုတဲ့ နာမည်ဘယ်လိုဖြစ်လာပါသလဲ
ပီပါ: အော်ဒါလား ပြောရရင်တော့ ပီပါတို့အဖေကရေထမ်းရောင်းတယ် တစ်နေ့ကျတော့ဆော့ရင်းနဲ့ ပီပါထဲကိုခေါင်းထည့်ပြီးအော်လိုက်တော့ အသံကြီးကဟိန်းပြီးထွက်သွားတာ အဲ့ဒါနဲ့ပဲ ပီပါဟိန်းဆိုပြီးဖြစ်သွားတာ
zaw: အော် သီချင်းဆိုတာက ငယ်ငယ်ထဲက ၀ါသနာပါတာလား အခုမှာထလုပ်တလား
ပီပါ: ဟုတ်ဘူးငယ်ငယ်ထဲက ၀ါသနာပါတာပါ ငယ်ငယ်ကဆိုရင် အဖေနဲ့ရေလိုက်ရောင်းရင်နဲ့ ရေရမယ်ရေ ဆိုတာကိုအသံနေအသံထားနဲ့ဆိုတော့ လူတစ်ချို့က အဆိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြရင်းနဲ့ပဲဝါသနာပါသွားတာပါ
zaw: ဟုတ်ကဲ့ပါ ဒီဂီတလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုဘယ်လိုရောက်လာလဲဆိုတာလေးတစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးလို့ရမလား
ပီပါ: ရပါတယ် ဒီလိုပါ တစ်နေ့ကျတော့ ပီပါက ယောင်ယောင်ပေပေနဲ့ ရန်ကုန်ကိုတက်လာတယ်လေ အဲဒါနဲ့ပဲ ဆိုက်ကားဂိတ်ကိုရောက်သွားတော့ နဂိုကလည်းရုပ်ရည်လေးကလည်းရှိတော့ ဆိုက်ကားသမားကိုတုတ်ကြီးက ပီပါကိုသဘောကျသွားပြီး လေးယောက်မြောက်မယားငယ် ထားလိုက်တာပေါ့နော် အဲ့ဒါနဲ့ပဲ တစ်နေ့ကျတော့ဈေးသွားဝယ်ရင်းလမ်းကြုံတာနဲ့ထီတစ်စောင်ထိုးလာတာကနေထီပေါက်ပြီး ချမ်းသာလာတာနဲ့ ၀ါသနာပါတဲ့ ဂီတကိုလုပ်လိုက်တာပါ
Zaw: ပီပါရဲ့ စီးရီးထဲမှာ ပါတာ super မှောင်ဆို တဲ့ ရက်ပါ လေးကကော ပီပါနဲ့ ဘယ်လိုသိတာလဲ
ပီပါ: သူကပီပါနဲ့က ငယ်ငယ်လေးကတည်းကသူငယ်ချင်းတွေလေဆော့ဖော်ဆော့ဖက်တွေပေါ့ သူရဲ့အမေက အလှုရှီရင်ထမင်းတို့ ဟင်းတို့ လိုက်ချက်တယ်လေ သူကလည်းလိုက်သွားတာပေါ့ အဲ့ဒီမှာသူအမေကို အိုးတွေစလောင်းဖုံးတွေ ဆေးကူရင်း စလောင်းဖုံးတွေကိုပွတ်ပွတ်ပြီးဆေးရင်းနဲ့သီချင်းလေးတွေဆိုတော့ ဘေးကလူတွေက ဒီကောင်လေး ပါရမီရှိတယ်လို့ ပြောကြတော့နောက် ဆို super မှောင်က အလှုမှာ စလောင်းဖုံး တွေအိုးတွေလိုက်ဆေးတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်တော့တာပါ အဲ့ဒါနဲ့ ပီပါလည်း ထီပေါက်တော့ စီးရီးထုတ်မယ်ကြံတော့ ရက်နေရာမှာဆိုမယ့်လူလို့တာနဲ့ ငယ်ငယ်က ခင်ခဲ့တဲ့ super မှောင်ကို ခေါ်လိုက်တာပါ ဒီရောက်တော့ စလောင်ဖုံးထပ်နဲနဲသေးတဲ့ DJ (Dick Joe) လေးကိုပွတ်ရင်နဲ့ပဲသီချင်းတွေဆိုပေးတာပါ
Zaw: ဟုတ်ကဲ့တော်တော်လေးကို ကောင်းပါတယ် ဒါနဲ့တစ်ခု ပီပါတို့ ကမြန်မာနိုင်ငံက နာမည်ကြီး အဆိုတော်တွေရှိတဲ့ အဖွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ CI အဖွဲကိုခြေမကြားမှာရှိတဲ့ချေးလို့ ယူတူ မှာကော်မန့် ရေးတာကိုတွေ့ရပါတယ် အဲ့ဒါ ပီပါတို့နဲ့ CI တို့ကြားမှာများ ပြသနာများရှိလို့လား
ပီပါ: ပြသနာဖြစ်တာကတော့ဒီလိုပါ ပီပါအဆိုတော်မဖြစ်ခင်ဆိုက်ကားသမားမယားဘ၀တုန်းကပေါ့နော် ပီပါက ဂီတမှာဝါသနာပါတော့ လေ့လာချင်တာပေါ့နော် ဒါနဲ့ဘယ်မှာ သွားလေ့လာချင်လဲဆိုတော့ CI အဖွဲမှာပေါ့နော် အဲ့ဒါနဲ့ CI အဖွဲမှာ ပီပါက ပတ်တိုင်း အိမ်သာဆေးသွားလျှောက်တာပေါ့နော် ခန့်ပါ ဘာညာပေါ့ အဲ့ဒီမှာ CI အဖွဲက ကိုလေးမဲကပီပါကို နင်ရုပ်ကြီးနဲ့များ အိမ်သားဆေးလာလျောက်ရသလားဘာလားပေါ့ နင်ရုပ်ကိုမြင်ရင် အီးတောင်ဘယ်လိုပါရမှန်းမသိတော့ဘူး အဲ့ဒီလို ပြောပြီး မောင်းထုတ်တာပေါ့နော် အဲ့ဒါနဲ့ပါပီပါလည်းအရမ်းစိတ်နာသွားပြီး လုံးဝကို တိုက်ခိုက်တာပါ
« Reply #9 on: March 18, 2011, 02:48:52 PM »
Zaw: အော်တော်တော်ကြီးမားတဲ့ပြသနာကြီးပါလားနော်….နောက်ထပ်တစ်ခုက ရက်ပါ အဆိုတော super မှောင်ကလည်း ဂီတာလောကမှာဆရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကိုငှက်ကြီး ခေါ် ကို ထူးအိမ်သင်ကိုဝေဖန်ထားတာကိုတွေရပါတယ် ‘ ဒီလူကြီး ကော်ပီတွေဆိုတာသေတာတောင်မှနည်းသေးတယ်ဆိုပြီး’ တော့လေ အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးလို့ရမလားမသိဘူး
ပီပါ: ဒါကတော့ဒီလိုပါ super မှောင် က ဒန်အိုးစလောင်းဖုံးတွေပွတ်ပြီးဆေးတာ ရွာမှာ ဆိုတော့သိပ်အဆင်မပြေတော့ဘူးလေ အလှုကသိပ်မှမပေါ်တာကိုး ဒါနဲ့ပဲ ရန်ကုန်ကိုတက်လာပြီး လုပ်စားမယ်ဆိုတဲ့အကြံနေ လျှောက်သွားရင်း နော်ဂတတ်တွေနဲ့တွေ့ရင်း မွေးစားဖို့ခေါ်သွားပြီး မွေးပြီးစားကြတာပေါ့နော်သူကိုလေ …..အဲဒီမှာဒီကောင်လေး တူယိယာတစ်မျိုးကိုထပ်တီးတတ်သွာရော သူထပ်တတ်သွားတာက ဘာဂျာမှုတ်တာလေ အဲဒီဘာဂျာကိုလည်းကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်မှုတ်တတ်သွားတော့ နော်ဂတတ်တွေက ခေါင်းဖာတွေနဲ့ချိတ်ပေးတယ် လေ အဲ့ဒီမှာတတ်ထားတဲ့ပညာလေးတွေကိုအသုံးပြုရင် ဘာဂျာကိုတစ်ဖက်ကမ်းခတ်ကျွမ်းကျင်သွားတာပေါ့ အဲ့ဒီမှာမြန်မာပြည်မှာဘယ်သူ ဘာဂျာတောသလဲပေါ့လိုက်ကြေည့်တော့ ကိုငှာက်ကြီး ကိုသွားတွေ့တာပေါ့ အဲ့ဒါနဲ့သူကပညာပြိုင်မယ်ဆိုပြီးသွားတော့ ကိုငှက်ကြီးက သေသွားခဲ့ပြီလေ နောက်ပြီး ကိုငှက်ကြီးတတ်တာက တစ်ကယ်ဘာဂျာနဲ့မှုတ်တာကိုတတ်တာ super မှောင်တတ်တာက အလွတ်မှုတ်တာ ကွာတာပေါ့နော် အဲဒီမှာ super မှောင်တစ်ယောက် စိတ်ဖောက်ပြန်သွားပြီး ရွာသာကြီးရောက်သွားတာပေါ့နော် အဲ့ဒီမှာ ၂နှစ်လောက်ကုပြီး ပြန်ကောင်းလာတော့ စိတ်လေပြီး ရွာမှာပဲ စလောင်းဖုံးပြန်ဆေးနေတော့တယ်လေ အခုမှာ ပီပါကောင်းမှုကြောင့် ဒီလိုဖြစ်လာတော့ပေါ့….
Zaw: တော်တော်လေးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရပါတယ်ခင်ဗျာ ……..နောက်တစ်ခုကတော့ပေါ့နော် ပီပါဟိန်းတို့က မြန်မာမှုကိုတော်တော်လး ပြောကြတယ်နော် ကမ္ဘာမှာမြန်မာဟေ့လို့ ကျွေးကျော်နိုင်တဲကသီချင်းတွေ ပြောတာကိုတွေ့ရပါတယ် ဒါပေမယ့်သီချင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ ဘာမှထူးထူးဆန်းဆန်းမပါတဲ့အပြင် တော်တော်လေးကိုအဆင့်အတန်းနိုမ့်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ် computer အထူးပြုလုပ်ချက်တွေကလည်း အင်မတန်မှညံဖြင်းပြီး တော်တော်ကိုအခြေအနေဆိုးပါတယ် နောက် ပြီး ပီပါတို့ပြောတာက ပရိတ်သတ်တွေက အရမ်းအားပေးတယ်လို့ပြောကြတယ်နော ဒါပေမယ့် ကျန်တော်ကြည့်ရသလောက်ကတော့ မရှိသလိုပါပဲ အဲဒီလောက်ဆိုးဆိုးရွားစုတ်ပြက်သတ်နေတာကို ဘာလို့ မြန်မာဟေ့လို့ကျွေးကျော်ရတာပါလဲဗျာ……..
ပီပါ: ပြောရရင်တော့ရှင် ပီပါတို့ကဒီလိုစဉ်းစားမိတယ်လေ ရိုးရိုးအတိုင်းပဲဆိုရင်တော့ပီပါတို့က နာမည်ကြီးဖို့လည်းမလွယ်သလို ကမ္ဘာကသိဖို့ဆိုတာကတော့ပိုလို့တောင်မဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်
ဒါကြောင့်ရိုက်ပြီးသားခွေကို ယူတူ ပေါကို တင်လိုက်တယ်လေ အဲ့ဒိတော့ ယူတူ မှာ ပီပါတို့အခွေကို unlike အများဆုံးနဲ့ အဆဲခံ ရတာအများဆုံးဆိုပြီး စံချိန်တင်သွားတယ်လေ ဒီတော့ ပီပါတို့ကို ကမ္ဘာကသိသွားတာပေါ့ နောက်ပြီး တစ်ချို့နိုင်ငံ ချားသားတွေတောင် ပီပါရဲ့ ဆက်ဆီ ဒက်လိုက် ကိုကြည့် ပြီး ဥတက်မတက်ရယ်မောကြတယ်လိုသိရပါတယ် နောက်ပြီး မြန်မာပြည်မှာ နာမည်ကြီးတာကလည်းဒီလိုပါ ပီပါအခွေဖြန့်လိုက်တော့ပေါ့နော် လူတစ်ချို့ဘာမှမသိတော့ဝယ်သွားပြီး အိမ်မှာနားထောင်ကြည့်တာပေါ့ ဖြစ်ချင်တော့ အိမ်ဒီအခွေကိုဝယ်သွားတဲ့ အိမ်ရှင်မ က ဖွင့်ပြီးနားထောင်ကြည့်လိုက်တော့ ဘယ်လိုပြောပြော.ပြောစကားနားမထောင်တဲ့ ဆိုဆုံးမလို့မရတဲ့ ဆိုးပေ သူသားလေးလာလည်းကြည့်လိုက်ရော အဲ့ဒိကလေးကြောက်လို့ငိုတာတက်မတက်တောင်ဖြစ်သွားတယ် အဲဒါနဲ့ပဲ သူအမေလည်းအကြံရသွားပြီး ပြောတာနားမထောင်ရင်ပီပါဟိန်းအခွေဖွင့်ပြရမလား လို့ပြောလိုက်ရင် အဲ့ဒီကလေး ညိမ်ပြီးနားထောင်သွားတာများတုတ်တုတ်တောင်မလှုပ်တော့လို့ အဲ့ဒီအိမ်ရှင်မလည်းသူ့နီးစပ်ရာ အိမ်ရှင်မအချင်းချင်းသတင်းပေးရင်း ပီပါအခွေက ပေါက်သွားတာပါ နောက်ပြီးရွာသာကြီးမှာလည်း ပီပါအခွေကိုဖွင့်ပြလိုက်ရင်ပြောဆိုလို့မရတဲ့အရုးတွေတောင်ညိမ်သွားပါတယ် ဒါကြောင့် အရမ်းကိုပေါက်သွားတာပါ……….
Zaw: အော်တော်တော့်ကိုမှတ်သားစရာပါပဲခင်ဗျာ နော်ကတစ်ခုဆက်လက်မေးချင်တာက ပီပါတို့က အဆိုတော်ကိုလေးမည်းတို့ကို ကော်ပီဆိုတယ်ဆိုပြီး ရှံချပါတယ် ပီပါဟိန်းတို့ ကတော့ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်စစ်လို့ပြောပါတယ် ဒါပေမယ့်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ Teriyaki Boyz: Tokyo Drift သီချင်းကို ခိုးချထားတာကိုတွေ့ရသလို Michael Jackson back or white သီချင်းကိုလည်း ခိုးချထားတာကို တွေ့ရပါတယ် အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းချင်ပါသလဲ……
ပီပါ: အော်ဒါကလည်းလွယ်ပါတယ် ဒီလိုလေ ပီပါတို့ကပရိတ်သတ်ရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုခံချင်တယ်လေဒါကြောင့်နာမည်ကြီး CI အဖွဲ့ကိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောလိုက်တော့ ပရိတ်သတ်က အာရုံစိုက်လာတယ်လေ
ဒါကြောင့် ကော်ပီဆိုတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လျှောက်ပြောတာပေါ့နော် ….နောက်ပြီး ခိုးချတယ်ဆိုတာကလည်း ရှင်းရတာလွယ်ပါတယ် အိန်တာနက်တို ယူတူတို့သုံးတဲ့သူတွေဟာနလပိန်းတုံးတွေလေ တောထဲကနေသုံးနေရတာဆိုတော့ရွီးလို့ရတယ်လေ အဲ့ဒါနဲ့ပီပါလည်း Tokyo Drift သီချင်းကို ပီပါလည်း ပီပါရဲ့ အဖိုးရဲ့ အဖိုးနန်းတွင်းက ချီးတော်ကုံး ကျိုင်းတော်ကိုင် နန်းတော်နောက်ဖေးလမ်းကြား ဆရာဖင် ရေးတာလို့ပြောလိုက်တာပေါ့ ဘယ်ရမလဲ ပီပါက လအမှမဟုတ်တာခက်တည်တည်နဲ့ အဲ့ဒီသီချင်းကို ပီပါအဖိုးရဲ့အဖိုးက DJ လေးပွတ်ပြီး ရေးထားတာလို့ နောက်မှာ့ Teriyaki Boyz အဖွဲက ၀ယ်သွားတာလို့ ဟုတ်တယ်လေဘယ်သူသိတာမှတ်လို့ နောက်ပြီး မိုက်ကယ်ကြက်ဆင်ဆိုတာ ပီပါသိတောင်မသိဘူး အဲ့ဒီင်္တုန်းက မြန်မာအဆိုတော်တစ်ယောက် ဆိုထားတာတွေ့လိုစာသားမိုက်တယ်ဆိုပြီး ပြောင်းလိုက်တာ အဲ့ဒီသီချင်းရေးဆရာကိုတော့ပုဆိုးစုတ်တစ်ထည်ကန်တော့လိုက်တယ်လေ အဲ့ဒါနဲ့ပဲစာသားပြောင်းပြီး ထည့်လိုက်တာ အဲ့ဒီသီချင်းထဲမှာပဲ super မှောင် ကသူရွာသာကြီးမှာတက်တုန်းက ပါးစပ်ကလျှောက်ပြောတဲ့ဟာတွေဝင်ပြောချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ပဲ ဆိုခိုင်းလိုက်တာပါ…….
Zaw: မေးတာလည်းစုံနေပြီး တစ်ခုနစ်ခုလောက်တော့နောက်ဆုံး အနေနဲ့မေးခွင့်ပြုပါ
ပီပါ: ဟုတ့်ကဲ့မေးပါ တစ်ခုနှစ်ခုမှမဟုတ်ပါဘူး တစ်ရာနှစ်ရာလည်းမေးနိုင်ပါတယ် ဒါမျိုးဖြေချင်နေတာကြာပါပြီ အင်း ယူတူမှာ ပီပါ ကိုဝေဖန်ကြတဲ့သူတွေကို ပီပါက မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း ပြန်ပြောတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ် ပရိသတ်ဆို တာလေးစားရမှာမဟုတ်ဘူးလား …..
ပိပါ : (ဒေါ်သထွက်စွာဖြင့်) အိုရာရာစစသူဆဲကိုဆဲပဲပေါ့ ဘာလို့လေးစားရမှာလဲ အဆိုတော်ဆိုတာ ပရိသတ်ရဲ့ ထမင်းရှင် အဆိုတော်လုပ်သမျှကိုသည်းခံအားပေးရမှာက ပရိသတ်တာဝန် ထမင်းရှင်ကိုမစော်ကားပါနဲ့လို့ ဒီနေရာကနေပရိသတ်ကြီးကိုပြောချင်ပါတယ် ………ဂီးဂီခူးခူး(ဒေါသထွက်နေသံ)
Zaw: တော်တော်လည်းစိတ်ပျက်သွားပါပီ နောက်ဆုံးမေးချင်တာတော့ ပီပါ ချမ်းသာလို့ စီးရီးထုတ်ရာကနေဘာလို့အခုဆင်းရဲသွားတာလည်းဆိုတာ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖြေပေးပါလား
ပီပါ: ပြောရရင်တော့အရှည်ကြီးပါပဲ တိုတိုနဲ့ချုပ်ရရင်တော့ပီပါကို တရားဝိုင်းဆွဲကျတယ်လေ
၁. ရုပ်ရည်မရှိပဲ ဆိုက်ကားသမား လေးယောက်မြောက်မယားငယ်ခံမှု
၂. ရုပ်ရုပ်မရှိပဲ ဖာခံစားမှု
၅. ဆက်ဆီဒန့်ဟုအမည်ခံကာ အရုးဒါတ်လိုက်သလိုကသောကြောင့် အရူးများသိက္ခာချမှု
၆. ယူတူတွင် နိုင်ငံချားသားနှစ်ယောက်ကြည့်မိရာ ရယ်ရလွန်း၍အူတက်သေဆုံးစေသောအမှု
၇. ဂီတ ဆိုတာ ဘာလဲနားမလည်းစာလုံးတောင်မပေါင်းတတ်ပဲနဲ့ မြန်မာဂီတလို့အမည်ခံကာ နိုင်ငံအား ဂုဏ်သရေညိုးနွမ်းစေမှု
၈. ဟောင်ဖွာဟောင်ဖွာနင့်လူတကာအားကတ်ကတ်လန်အောင်ပြန်လည်ရန်တို့မှု တို့အပါဝင်အချား အမှုပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်တို့ နဲ့ ပီပါကိုတရားဝိုင်းဆွဲကြတယ်လေ ဒါကြောင့်ပီပါလည်းလျော်ကျေးတွေအကုန်ပေးပြီး ဘရာက အစ ပန်တီအဆုံး ချွတ်ပေါင်ပြီးတော့ ဟော့ဒီမွေးဖွားရာဇာတိလေးမှာ ဖျာလိပ်ပတ်ပြီးနေနေတာလေ
Zaw: ကဲမေးလို့လည်းပြီးပါပြီ နောက်တစ်ပတ် ကျန်တော်တို့ရဲ့ naked news များ ထည့်ပေးပါမယ်ဗျာ အင်မတန်မှခက်ခက်ခဲခဲကြိုးကြိုးစားစား အဆိုတော်ဖြစ်လာပုံကို သွားလိုက်ပါဦးမယ်……….
ပီပါ : ဟော့ဟော့ ဗျုးဆရာကြီး လူကိုဗျူးချင်တိုင်းဗျူးပြီးတော့ ဒီတိုင်းထွက်သွားလို့ရမလား ပိုက်ဆံပေးရမယ်လေ ဗျုးခ
Zaw: ဟာပိုက်ဆံမရှိလို့ဗျူးပါတယ်ဆိုမှ ဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်မှာလဲဗျာ
ပီပါ : မရဘူးမရဘူး ပေးရမယ် မပေးရင် ပီပါရဲ့ သီချင်းဆိုတာကိုနားထောင်ရမယ်
Zaw: အမလေး မယ်မင်းကြီးမရယ် မဆိုလိုက်ပါနဲ့တောင်းပန်ပါတယ် ရော့ရော့ဒီမှာ ကျတော်ရဲ့နာရီရေးယူထားလိုက်ပါ အပေါင်ဆိုင်မှာပေါင်လိုက်ရင်၁ရာလောက်တော့ရမှာပါနော် ဒါပဲယူလိုက်တော့
ကျန်တော်လည်းနာရီချွတ်ပေးပြီးသကာလ အနောက်ကိုပင်လှည့်မကြည့်တော့ပဲ ဖနှောင်နဲကတင်ပါးတစ်သားထဲကျအောင်ပြေးထွက် လာရပါသည်တကား …………..